Maitiro ekutsvaga kunze kweNotes kune PDF fomati | Ndinobva mac
Mumakore apfuura, iko kunyorera kweNotes kwave kuita chishandiso chakanakisa kuti isu tese tinofanirwa kufunga zuva nezuva. Kubudikidza nechishandiso cheManyorerwo, isu hatigone kungopa pachena kune kwedu kufunga, asi isu tinogona zvakare kuishandisa kugadzira izvo-zvekuita zvinyorwa, nyora pasi izvo zvinopinda nepfungwa dzedu, gadzira zvinyorwa zvekutenga, mapeji ewebhu, mifananidzo ...
Zvakare, nekuda kweiyo bvumirana neICloud, tinogona kuwana zvese zvemukati zvakachengetwa mushandisi kubva kune chero chishandiso cheIOS kana Mac inosangana neiyo ID. Kana pane chero chiitiko, isu takamanikidzwa kugovana zvirimo zvetsamba nemunhu asiri mukati meiyo Apple ecosystem, isu tine dambudziko. Dambudziko rine mhinduro iri nyore.
Mhinduro yacho yakapusa sekuburitsa katsamba muPDF fomati, kuitira chengetedza mafomati ese atakatomisikidza muiyo notku. Apple, yakatendeka kufilosofi yayo, inotibvumidza kutumira manotsi zviri nyore uye pasina matambudziko chero chinyorwa chatakachengeta mukushandisa, kuitira kuti tigone kuchichengeta segwaro rakaparadzana, kuchigovana, kuritumira nepositi ...
Sevha Zvinyorwa sePDF gwaro
Kana tangovhura iyo manyorerwo chikumbiro, tinofanirwa kuenda kune iyo ona isu tinoda kutumira kunze muPDF fomati.
Tevere, isu tinoenda kumusoro menyu uye tinya pa Faira> Export sePDF.
Zvino isu tinongofanirwa kumisa kuti ndeipi iyo gwaro zita nenzvimbo kwatinoda kuburitsa gwaro.
Kana gwaro ragadzirwa, tinogona kutarisa kuti rakachengeta sei zvese zvinongedzo zvaisanganisirwa uye nemhando isu yataive tatanga. Kana tangotengesa kunzeita muPDF fomati yatinokwanisa igovane nechero mumwe mushandisi asina Apple ID.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » Tutorials » Maitiro ekuburitsa maNotes kuPDF fomati
Kuvakwa kwenzvimbo nyowani yedata muIreland kwakanzurwa